10 Oktobra 2020 - FJKM Québec - Canada
9 octobre 2020 by Njaka Ramanandafy
Ny mpino miatrika ady
TANTARA VOALOHANY 14 : 8-17
14:8 Koa nony ren’ny Filistina fa efa nohosorana ho mpanjakan’ny Israely rehetra Davida, dia niakatra hitady azy ny Filistina rehetra. Koa raha ren’i Davida izany, dia nivoaka hiady taminy izy.
14:9 Ary dia tonga ny Filistina ka nihahakahaka teny amin’ny Lohasahan’ny Refaita.
14:10 Ary i Davida nanontany tamin’Andriamanitra hoe: Hiakatra hamely ny Filistina va aho? Hatolotrao eo an-tanako va izy? Dia hoy Jehovah taminy: Miakara, fa hatolotro eo an-tananao izy.
14:11 Dia niakatra nankao Bala-Perazima i Davida ka namely azy teo; dia hoy izy: Ny tanako no namakian’Andriamanitra ny fahavaloko hipariaka toy ny rano vaky; koa izany no nanaovany ny anaran’izany tany izany hoe Bala-Perazima.
14:12 Dia nilaozan’ireny teo ireo andriamaniny, ka dia nasain’i Davida nodorana tamin’ny afo.
14:13 Ary tonga indray ny Filistina ka nihahakahaka teny an-dohasaha indray.
14:14 Dia nanontany tamin’Andriamanitra indray i Davida ka novaliany hoe: Aza mandeha hanenjika azy; fa mivilia azy, dia mandehana, fa ho tonga eo aminy ianao eo amin’ny tandrifin’ny hazo balsama.
14:15 Ary raha toa mahare fingadongadon’olona eny amin’ny tendron’ny hazo balsama ianao, dia miainga amin’izay hiady; fa amin’izay no efa miainga mialoha anao Andriamanitra hamely ny miaramilan’ny Filistina.
14:16 Ary dia nanao araka izay nandidian’Andriamanitra azy i Davida, ka dia namely ny miaramilan’ny Filistina hatrany Gibeona ka hatrany Gazera izy.
14:17 Ary ny lazan’i Davida niely teny amin’ny tany rehetra; ary nataon’i Jehovah nahazo ny firenena rehetra ny tahotra an’i Davida.
1-Manontany an’ Andriamanitra
« Ary Davida nanontany an’ Andriamanitra …Dia hoy i Jehovah , miakara fa hatolotro eo an-tànanao izy » (and10) .
Vao voahosotra ho mpanjakan’Israely rehetra i Davida dia tonga hiady taminy tao Refaita ny Filistina . Nanontany an’ Andriamanitra i Davida na hiaraka aminy Izy na tsia . Rehefa nambaran’ Andriamanitra taminy fa hampandresy azy Izy , dia niroso tamin’ny ady i Davida ka dia nandresy . Nanankina ny adiny tamin’Andriamanitra i Davida fa tsy niankina tamin’ny heriny sy ny fahaizany miady . Araka izany , ny olom-boahosotr’ Andriamanitra miatrika ady dia tsy maintsy manankina ny adiny amin’Andriamanitra mba hanehoan’Andriamanitra ny heriny , hahazoana fandresena ao anatin’ izany . Ny modely amin’izany dia i Jesoa Kristy .
2-Manaiky hotarihan’ Andriamanitra
« aza mandeha…miaingà amin’izay hiady , fa amin’izay no efa miainga mialoha anao Andriamanitra » (and14,15)
Taty aoriana , tonga tao Refaita indray ny Filistina hanafika an’iDavida . Rehefa avy nanontany an’Andriamanitra indray i Davida , dia nanome torohevitra azy Andriamanitra , ary nanaraka izany izy . Vokany : resy tosika ny miaramilan’ny Filistina . Rehefa miatrika ady dia araho ny torohevitra sy ny toromarika omen’Andriamanitra anao amin’ny alalan’ny teniny sy ny bitsiky ny Fanahy Masina , fa aza mandeha araka ny sitraponao mba hahitanao ny fahombiazana eo amin’ny ady atrehanao miaraka amin’Andriamanitra , ary izany no nahatonga an’i Jesoa Kristy nandresy hatramin’ny herin’ny fahafatesana aza satria nanaiky ny sitrapon’ Andriamanitra .
Raha sendra olana sy zava-manahirana hianao, ahoana ny fomba fiatrehanao izany ?